75W Garage yokuPaka UkuKhanya ukuKhutshwa koMbane China Manufacturer
Inkcazo:Iigaraji zokuKhanya kweeGaraji zivuliwe,I-Garage Light Sensor,UkuPaka kweGaraji yokuKhanya
Home > Imveliso > Ukukhanya kwe-LED ye-Canopy > 60w Led Canopy Light > 75W Garage yokuPaka UkuKhanya ukuKhutshwa koMbane
75w Ukupaka yethu super eqaqambileyo Garage Light zenziwe nge-High Lumen Isiphumo se-LED chips, i-5000k emhlophe yelanga. Le 75W Garage Light ekubekwa Led kuyalingana 250W HPS / sazifihla / ukukhanya HALIDE simiso ngendlela ephezulu 120lumens watt nganye, ukuya 9000lm nokuncipha encinane mithambo; Ixesha elide lokufikelela kuma-50,000hrs. I- Garage Light Sensor Umhlaba uphethwe ngokugqithiseleyo ngepenistanti, ebonakalayo kunye neyokukhusela; Isitya sokukhupha esilungileyo senza ukufakeka kube lula kwaye intambo yokhuseleko yensimbi engenakunqununu yenza lo mbane wokupaka ukukhanyisa ukukhangela ukukhutshwa kabini ukhuseleko.
Injini yethu yokukhanya yokupaka igaraji i-IP65 yokunikezela kwamandla angenawo amanzi, izikrini ezilungiselela ukukhusela, indlela ye-silicon gasket eya kwenza wonke umbane wendlela yokupaka igaraji into evikela amanzi;
I-Led Canopy Light Retrofit Kit Lighting 50W Qhagamshelana Ngoku
Iigaraji zokuKhanya kweeGaraji zivuliwe I-Garage Light Sensor UkuPaka kweGaraji yokuKhanya Igaraji lokuKhanya kweGaraji Iipadi zokuKhanyisa zeGadi ziyathengiswa Iingqapheli zoKhanya kweSitetal Igadi yokukhanya kweDubai Iimpahla zokuKhanya kweziKhenketho zokuVala